Ihe Ntanye Ihe Nweta
Ihe nkiri Greenhouse
Ihe nkiri Mulch
Ihe nkiri Silage Stretch
Chifeng: na -akụ ezigbo ebe obibi na griin haus
site na nchịkwa na 21-10-12
Ọ na -amasị m ịhụ ka akwa ahụ jupụtara n'ubi na -eme nri, ogige ahụ na -enwukwa ebe niile. N'okpuru mbara igwe na -acha anụnụ anụnụ na igwe ojii na -acha ọcha, osisi na -ese onyinyo, ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahụ dịkwa ọcha na edo edo, jupụta n'ike. Ka ị na -ahụ, ihe niile bụ ọmarịcha, dị ka okooko osisi na -acha ọcha nwere ntụpọ gr ...
Greenhouses na -enye nlebara anya ọhụrụ na mkpofu nke oge gara aga
site na nchịkwa na 21-10-09
Na Septemba 3, na ogige ngosipụta ọrụ ugbo mara mma nke Shengda, Zhangcun Town, Dengzhou City, Nanyang City, Henan Province, ndị njem na -ewere obere tomato n'ụlọ griin haus nke ọma. Dabere na akụkọ, Dengzhou Shengda smart park ngosi ogige bụbu ebe mgbazinye maka ...
Kedu ụdị griin haus? Kedu ihe owuwu na njirimara nke ụlọ griinụ dị iche iche?
site na nchịkwa na 21-09-29
Ụdị griin haus: [multi span griin haus] n'eziokwu, ọtụtụ ụlọ griin haus bụ ijikọ griin haus nke mbụ nwere ezi uche. Ma ọ bụ enwere ike ịghọta na, dị ka mkpuchi, a na -ejikọ otu griin haus n'ozuzu ya, ya mere a na -akpọ ya griin haus ọtụtụ. Multi -agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ...
Ahịa nleba anya ụgbọ ala: Nyocha nke ọkara mbụ 2021 na Outlook nke ọkara nke abụọ 2021
N'ime ọkara mbụ nke afọ a, ebuferela nde nde 91.4 nke ụgbọala. Kemgbe nkeji nke atọ nke afọ gara aga, ahịa ngosi ụgbọ elu ahụla nlọghachi ngwa ngwa V, nke gara n'ihu na nkeji nke abụọ nke afọ a. Nnukwu ntụgharị ihu ka elu. Dabere na ngụkọta ụgbọ mmiri ...
Internetntanetị nke ihe jikọtara ya na ihe ngosi data n'okpuru ọrụ ugbo mara mma iji mepụta gburugburu ebe obibi ọhụrụ nke griin haus dijitalụ
Site na mmepe sayensị na teknụzụ ngwa ngwa, oge ọrụ ugbo na -eche Loess ihu na ihu igwe abụrụla akụkọ ihe mere eme, na echiche nke ọrụ ugbo nwere ọgụgụ isi abanyela n'ụlọ ndị nkịtị. N'etiti nhazi 2D na nhazi 3D, HT maka ngwaahịa weebụ nke hightopo (herei ...
Ihe omume ogige ahịhịa nke Taiyuan meriri ihe nrite abụọ nke "2021 World structure Award"!
site na nchịkwa na 21-08-30
N'oge na -adịbeghị anya, ihe ngosi griin haus nke Taiyuan botanical garden nke Shanghai Architectural Design and Research Institute Co., Ltd. mepụtara ka edepụtara nke ọma maka onyinye abụọ: Nhazi nka nhazi (ụdị ụlọ) na ntinye ihe nrụpụta nke 2021 usoro ihe owuwu ụwa ...
Nkọwa nke griin haus na North China na South China
site na nchịkwa na 21-08-24
N'ihi ihu igwe dị na mpaghara ugwu na ndịda, ụdị griin haus dị iche iche. Ihu igwe nke dị n'ebe ugwu bụ oyi, na nhazi usoro nke griin haus kwesịrị izute mmepụta na arụ ọrụ n'oge oyi. Ya mere, griin haus kwesịrị inwe ezigbo ikuku insulat ...
Griin haus Smart: ntụzịaka mmepe ọdịnihu
Ugbo mara mma bụ ebumnuche dị mkpa nke mmepe ugbo nke oge a. Ugbo ala aghọọla okwu nnọchi anya teknụzụ dị elu. Ugbu a ọrụ ugbo mara mma abụghị ihe a na -apụghị inweta. Ọ ghọọla isi ọrụ aka ọrụ mmepe ugbo. Ihe bụ isi nke ndị amamihe ọgbara ọhụrụ ...
Mpaghara mmepe akụ na ụba Changzhou: ụmụ agbọghọ ụlọ ifuru “post-90s” na-alaghachi n'ụlọ ka ịmalite azụmahịa wee too "okooko osisi bara ụba"
site na nchịkwa na 21-08-11
N'ime obodo Dongzhou, Obodo Hengshanqiao, mpaghara mmepe akụ na ụba Changzhou, enwere ogige ifuru akpọrọ "ogige koala". Nnukwu ụlọ ifuru iko gbara okooko osisi na osisi dị iche iche gburugburu. Osisi mara mma na ite ifuru mara mma na -egosi “onye ọrụ ...
Kedu ihe kpatara iji griin haus maka ịkụ ihe? Kedu uru nke ịkụ mkpụrụ griin haus
site na nchịkwa na 21-08-06
Ọrụ ugbo bụ otu n'ime isi ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na China. Greenhouse bụ akụkụ dị oke mkpa na mmepe ugbo, ọrụ ya na -adịwanye mkpa. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, iwu na itinye teknụzụ njikwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mmiri -...
Griin haus nwere ọgụgụ isi, ntụzịaka ọhụụ nke ọrụ ugbo ọgbara ọhụrụ
site na nchịkwa na 21-08-03
Site na mmepe ngwa ngwa nke ịkọ ahịhịa, ụlọ griinụ nwere ọgụgụ isi (nke a na -akpọkarị griin haus nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ griin haus nke oge a) malitere. Ọ bụ ụdị ọrụ ugbo echekwara nke ọma. Ọ nwere sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi. N'iji usoro a, ọtụtụ ...
Gịnị bụ ihe nkiri film griin haus dị ka?
site na nchịkwa na 21-07-30
A na -akpọkwa griin haus ihe nkiri. Ugbu a, ọ bụkwa mba nwere ọnụ ọgụgụ griin haus kachasị na usoro mkpuchi. N'ime ọtụtụ mbọ, oghere dị n'agbata griin haus plastik na mba ndị mepere emepe adịla mkpụmkpụ. Dị ka anyị niile maara, anụ ọkụkụ na-apụ apụ n'oge ...
12 Ọzọ> >> Peeji 1 /2
Ebumnuche anyị nke imewe bụ ERGONOMIC,
Ọhụrụ, ọrụ, na -egbo mkpa ndị ahịa.
Adress:B305, okporo ụzọ Chunchang 142, mpaghara ụlọ ọrụ Xinzhuang, Shanghai, PRC.
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Mkpọchi mkpọchi ihe nkiri Greenhouse, Profaịlụ mkpọchi ihe nkiri Poly Greenhouse, Spring Waya N'ihi Ịkpọchi Film, Profaịlụ mkpọchi griin haus, Profaịlụ na Zigzag Spring Waya, Ihe nkiri Bale Kechie Maka Ọrịre, Ngwaahịa niile